ချစ်သူလား / လက်တွဲဖော်လား | Myanmar Gazette News Media Forum Network
My Dear Diary » ချစ်သူလား / လက်တွဲဖော်လား	2
ချစ်သူလား / လက်တွဲဖော်လား
Posted by Foolish Girl on Oct 6, 2016 in My Dear Diary |2comments
နွေးထွေးတဲ့ပွေ့ဖက်မှုတခုက ကိုယ်ချစ်ရတဲ့သူ ကိုလုံခြုံစေတယ်
ညစ်နွမ်းတဲ့ပွေ့ဖက်မှုတခုကကျ ကိုယ်ချစ်ရတဲ့သူ ရဲ့ဘဝကိုကိုစွန်းထင်းစေတယ်
နားလည်ပေးတဲ့စကားတခွန်းက ကိုယ်ချစ်ရတဲ့သူ ကိုအားတက်စေတယ်
အပြစ်တင်တဲ့စကားတခွန်းကကျ ကိုယ်ချစ်ရတဲ့သူ ကိုသိမ်ငယ်သွားစေတယ်
အားပေးတဲ့စကားတခွန်းက ကိုယ်ချစ်ရတဲ့သူ ကိုခွန်အားဖြစ်စေတယ်
လစ်လျူရှူတဲ့စကားတခွန်းကကျ ကိုယ်ချစ်ရတဲ့သူ ကိုစိတ်အားငယ်စေတယ်
ဂရုစိုက်တဲ့အပြုအမူတခုက ကိုယ်ချစ်ရတဲ့သူ ကိုကြည်နူးစေတယ်
အမှတ်တမဲ့အပြုအမူတခုကကျ ကိုယ်ချစ်ရတဲ့သူ ကိုဝမ်းနည်းစေတယ်
တွဲခေါ်တတ်တဲ့လက်တစုံက ကိုယ်ချစ်ရတဲ့သူ ကိုဘဝမှာရင်ဆိုင်ရဲစေတယ်
ချန်ထားတတ်တဲ့လက်တစုံကကျ ကိုယ်ချစ်ရတဲ့သူ ကိုဘဝမှာကြောက်ရွံ့စေခဲ့တယ်လေ
ဒုက္ခတွေအမျိုးမျိုးထဲက ကိုယ်ချစ်ရတဲ့သူ ရဲ့လက်ကိုမလွှတ်တမ်း ဆုပ်ကိုင်ထားတဲ့လူ
အပြစ်တွေလုပ်တဲ့အခါ အပြစ်တင်တာထက် နားလည်မှုပေးတတ်တဲ့လူ
အဲဒီလိုလူဟာ မိမိအတွက်ချစ်သူအပြင် ဘဝမှာသင့်တော်တဲ့လက်တွဲဖော်တယောက်ပါပဲ
အခက်အခဲဖြစ်ချိန်ရှောင်ပြေးတတ်သူ ၊ ဒုက္ခတွေ့ချိန်ချန်တတ်သူ ၊
အဲဒီလိုဆိုရင်တော့ အဲဒီလိုလူဟာ မိမိအတွက် ချစ်သူသာဖြစ်မှာပါ
ပြသနာတွေချုပ်ငြိမ်းသွားတဲ့ Happy Ending မဟုတ်သေးဘူး Beginning of the life ပါ
အဲဒီအချိန်ကျရင် မကြုံဘူးမတွေ့ဘူးသေးတဲ့ ပြသနာတွေကထပ်ပြီးစောင့်နေဦးမှာဘဲ
ကိုယ့်အတွက် ချစ်သူ လိုအိမ်ထောင်ဖက်မျိုးက ကိုယ်နဲ့အတူတူ ဒုက္ခတွေကြုံလာရင် အတူတူခါးစည်းပြီးခံပေးနိုင်မှာလား????
ကိုယ့်အတွက် လက်တွဲဖော် လိုအိမ်ထောင်ဖက်မျိုးက ကိုယ်နဲ့အတူတူ ဒုက္ခတွေကြုံလာရင် အတူတူခါးစည်းပြီးခံပေးနိုင်မှာလား????
သူ့အတွက် အကောင်းဆုံး လက်တွဲဖော်ဖြစ်နိုင်အောင် ဖြစ်ထိုက်အောင်
Thint Aye Yeik says: တချို့ မိတ်ဆွေကောင်းတွေကတော့ ချစ်သူတွေ လက်တွဲဖော်တွေထက်တောင် ပိုပြီးတော့ ကိုယ့်ကို နားလည်ပေးသေးတယ်။ ပိုပြီးတော့ ကိုယ်နဲ့အတူ ရှိနေပေးသေးတယ်။
လက်တွဲဖော်ရော မရှိသေးတဲ့သူ(ကြော်ငြာဝင်တာ)ဆိုတော့. . .
မိတ်ဆွေကောင်းတွေနဲ့ပဲ ဘယ်သူက ဘယ်သူ့အခက်အခဲကို ဘာကူညီနိုင်မလဲ
ဘာတွေ မျှဝေ ခံစားပေးနိုင်ကြမလဲ ဆိုတာကို ပို တွေးဖြစ်နေတယ်။
Foolish Girl says: လူပျိုကြီး / အပျိုကြီးတကယ်လုပ်မှာလားပြောစမ်းပါရည်ရွယ်တဲ့မင်းအကြောင်းကို……………………